Ingabe 3D okubhaliwe umphefumulo? Thatha wena ukwazi izinto ezishisa 3D zokunyathelisa - China Cixi Lanbo Ukuphrinta
Ingabe 3D okubhaliwe umphefumulo? Thatha wena ukwazi izinto ezishisa 3D zokunyathelisa
Abantu abaningi banake 3D zokunyathelisa, okokuqala kunakho konke, bakhangwa izinto ezincane enhle ezinyatheliswe 3D. Ngaphezu kwalokho, abanye abangane ngeke obakhathalelayo ukusebenza onobuhle ezahlukene amaphrinta 3D, futhi izinto 3D zokunyathelisa dengwane ezimweni eziningi. Empeleni, izinto zokunyathelisa 3D kungashiwo ukuthi abe impahla isisekelo esibalulekile sokuthuthukiswa 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe. Ukuthuthukiswa izinto kakhulu enquma ukuthi ukuphrinta 3D ingasetshenziswa kabanzi.
Njengamanje, izinto zokunyathelisa 3D ikakhulu zihlanganisa izinto polymer, izinto zensimbi, powder izinto, izinto Ceramic futhi izinto oluyinhlanganisela.
Polymer izinto ikakhulu zihlanganisa amapulasitiki ubunjiniyela, bio-zepulasitiki, thermosetting zepulasitiki, inhlaka photosensitive, njll, futhi ukusebenza izinhlobo ezahlukene izinto abaphila ngayo ihluke ngokuphelele.
Engineering plastic libhekisela plastic yezimboni esetshenziswa njengoba izingxenye ezimbonini noma yangaphandle bezinhlamvu izinto. Kuyinto plastic ngamandla kakhulu, umthelela ukumelana, ukushisa ukumelana, ubulukhuni nokuzabalazela ukuguga. Kuyinto uhlobo 3D zokunyathelisa impahla ezining kwezicelo; bioplastics It ikakhulu has PLA, PETG, PHB, njll, futhi biodegradability ezinhle; thermosetting resin has namandla high kanye ukumelana nomlilo, nokuthunqa kakhulu efanelekayo powder laser sintering inqubo ukwakha usebenzisa ukuphrinta 3D; resin photosensitive has ngesivinini ngokushesha sokwelapha, itafula Excellent ukusebenza ezomile, ukubukeka bushelelezi ngemva udini, ukukhethwa eziningi ephezulu ukucacisa imikhiqizo zokunyathelisa.
Nakuba iningi lemikhandlu zamanje izinto zokunyathelisa 3D kukhona zepulasitiki, amandla okuhle mechanical conductivity kagesi we metal wenzé abacwaningi benesithakazelo ukunyatheliswa sufaka. The main metal izinto zihlanganisa izinsimbi ayoni kuhlanganise insimbi engagqwali futhi superalloys, nezinsimbi non-ayoni ezifana titanium, magnesium alloy, futhi gallium.
Kuyinto neither material plastic noma impahla metal, kodwa nezimo zalo ezinhle ukuba 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe, powder izinto zisekhona ungumuntu omuhle ukuba 3D zokunyathelisa. 3D zokunyathelisa kudinga okusezingeni eliphezulu powder izinto, futhi powder udini kuyadingeka formability ezinhle ezibonakalayo, amandla okusezingeni eliphezulu udini, amancane ngosayizi powder kuyizinhlayiyana, ubunzima agglomeration, impahla ezinhle elendlalekile, ukuminyana ofanele futhi porosity, futhi omiswe okusheshayo futhi eyenza lukhuni. Eyokuqala abazikhiqizela Sprinkler isihlabathi uhlobo 3D iphrinta akhiwa CELA Technology Co., Ltd. isebenzisa asebenza ngebhethri isihlabathi powder izinto.
izinto ezenziwe ngobumba
Aluminosilicate powder Ceramic ingasetshenziswa 3D ephrintiwe imikhiqizo sobumba. I 3D ephrintiwe umkhiqizo Ceramic abuthonywa amanzi, ukushisa (kufika ku-600 ° C), kabusha, okungezona anobuthi, kodwa amandla alo akuyona okusezingeni eliphezulu, ingasetshenziswa njengenhlangano Cookware ekahle, tableware (izinkomishi, izitsha, amapuleti, amaqanda izinkomishi kanye coasters)) nekhaya umhlobiso izinto ezifana zezibani, ama-tile, isitsha sezimbali, futhi yobuciko.
Ngokungangabazeki, njengoba ngesisekelo 3D zokunyathelisa, izinto zokunyathelisa 3D lizoba emakethe kubalulekile esizayo 3D zokunyathelisa. izinto abaningi nokusebenza kakhulu ezothuthukiswa ukuze kwenyuswe ukuthuthukiswa 3D zokunyathelisa umkhakha. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu izinto zokunyathelisa 3D, inkositini ubuchwepheshe core core izingxenye 3D zokunyathelisa ubuye impumelelo ezibalulekile ekuthuthukiseni ezifuywayo 3D zokunyathelisa umkhakha. Leso sichotho sashiya kukhalwa uchungechunge 3D iphrinta ngu CELA umkhankaso iyona inkjet printhead lokuqala ithuthukiswe China. (3D izingxenye ukuphrinta core) kuyingqopha-mlando, futhi ngethemba ukuthi izinkampani ngaphezulu China ongonga amandla ekuthuthukiseni 3D zokunyathelisa core ubuchwepheshe esikhundleni sokuncika ngokuphelele ubuchwepheshe angaphandle.